Fikarohana momba ny firaisana Tranom-pitaizana Reellarnation of Mandeep Kaur | Pushpa: Fiovan'ny Finoana amin'ny toe-javatra iainan'ny fiainana taloha - Fikarohana momba ny vatana teraka
Ny mpikaroka: Satwant K. Pasricha, Ian Stevenson, MD mpiara-miasa
Avy amin'ny: Afaka mihemotra lavitra ny fahafatesana ve ny saina? Vol. Fikarohana momba ny firaisana amin'ny vatana vaovao 1, nataon'i Satwant K. Pasricha
Ny Fahafatesan'ny Mandeep Kaur, Sikh
Nipetraka tao New Delhi, Inde, i Mandeep Kaur, niaraka tamin'ny vadiny, izay nanamboatra bisikileta velona. Nanontany ny zandriny i Mandeep. Ny fianakavian'i Mandeep dia tsy nahita fianarana, tsy dia mahantra loatra ary anisan'izy ireo Ny fivavahana Sikh. Toeram-pivavahana iray malaza ho an'ny Sikhs no Harmandir Sahib, fantatra amin'ny anarana hoe Tempolin'i Golden, izay aseho amin'ny ankavanana.
Tamin'ny 2 Jona 1961, ny vadin'i Mandeep dia nanindrona antsy azy ho faty.
Mandeep Reincarnates tahaka an'i Pushpa, tovovavy Hindu
Tokony ho tamin'ny 4 taona taty aoriana, zazavavy antsoina hoe Pushpa dia teraka tamin'ny 16 June, 1965 tany New Delhi, manodidina ny 350 metatra na 380 yards izay nonenan'i Issep. Ny fianakavian'i Pushpa dia avy amin'ny Fivavahana Hindoa.
Raha vao 18 volana lasa izy, dia nilaza i Pushpa nanondro ny toerana nipetrahan'i Mandeep sy ny vadiny. Taorian'izay, nilaza i Pushpa fa nanambady an'i Sikh izy ary nitanisa ny anaran'ny zanany nandritra ny fihavaozana teo aloha. Rehefa nanontanian'ny fianakaviany ny zavatra nataon'ity lehilahy ity ho an'ny velona, ​​dia nanao fihetsiketsehana tamin'ny tongony i Pushpa toy ny hoe manenjika bisikileta.
Fiainan'i Pushpa taloha an'i Phobia an'ny antsy sy fahalalana tsy ara-dalàna momba ny fanao ara-pinoana Sikh
Raha teo anelanelan'ny 2 ka hatramin'ny 3 taona izy, dia nampiseho tahotra mafy tamin'ny antsy i Pushpa. Fantany ihany koa ny fomba fanao ara-pivavahana Sikh, izay tsy fahita firy ny tovovavy Hindu.
Farany dia niteny tamin'ny fianakaviany i Pushpa fa tamin'ny androm-piainany taloha dia ny anaran'i Mandeep Kaur no anarany ary nosamborin'ny vadiny ho faty izy. Pushpa dia naneho fiahiana lalina ho an'ny zanany hatramin'ny fahazazany vao teraka ary te hitsidika ny fiainany taloha izy.
Nanapa-kevitra ny hanadihady ny fangatahan'i Pushpa ny fianakaviana, ka nanontany momba ny vehivavy Sikh iray izay nogadraina. Hitany fa mifanohitra amin'ny tantaran'i Mandeep Kuar ny tantaran'i Pushpa, izay mpanamboatra bisikileta ny vadiny.
Pushpa dia Fantatra Tsara ny Fianakaviany
Nifandray tamin'ny fianakavian'i Kaur ny fianakavian'i Pushpa ary nandamina fivoriana iray, izay nantsoin'i Pushpa ho mpikambana ao amin'ny fianakaviany taloha. Rehefa nihaona tamin'ireo rahavavin'i Mandeep i Pushpa, izay efa zokiny kokoa noho izy, dia nikarakara azy ireo i Pushpa, toy ny hoe mbola tanora izy ireo, toy ny hoe tsy miova ny taonany.
Rehefa nihaona tamin'ny vadiny sy ny mpamono an'i Mandeep i Pushpa, dia nasehony fa "marevaka sy tsy firaharahiana." (1)
Ny fianakaviana Mandeep sy Pushpa dia nandà ny fahalalana teo aloha, ny fifankafantarana na ny fifaneraserana. Dr. Pashricha nanamarika fa na dia metatra 350 ihany aza no nanasaraka ny tranony, dia niaina tamina tontolo samihafa izy ireo. Nobeazina ny fianakavian'i Pushpa, niaraka tamin'ny fianakaviany, ka anisan'izany ny dokotera, manam-pahaizana Sanskrit, mpanao gazety ary mpampianatra. Ankoatra izany, dia Hindoa izy ireo ary tena nanan-karena. Mifanohitra amin'izany, ny fianakaviana Mandeep dia nahantra, tsy nahita fianarana ary Sikh.
Pushpa dia manatrika ny fampakaram-badin'ny zanany vavy taloha
Pushpa dia nanana fifandraisana tamin'ny fianakavian'i Mandeep ary nandray anjara tamin'ny fampakarambadin'ny zanakavavin'i Dréip.
Dr. Pasricha dia nanadihady in-efatra an'i Pushpa teo anelanelan'ny 1973 sy 1975, ary koa ny informatika 17 hafa nandray anjara tamin'ity tranga ity. Dr. Pashricha koa dia namerina namaky ny tantaran'i Autopsy an'i Mandeep. Ny famaranana azy dia ny tranga iray momba ny fanambadiana raindahiny. (2)
Fiovana amin'ny finoana: Mandeikh dia Sikh, fa i Pushpa dia teraka tao amin'ny fivavahana Hindu. Pushpa dia nanana fahalalan'ny fahalalany ny fombafomba ara-pivavahana Sikh, na dia teraka tao amin'ny fianakaviana Hindu aza izy.
Fiainana taloha Phobia: Tamin'izaho mbola zaza, Pushpa dia nanana tahotra ny antsy, nanasongadina ny fiainany taloha izay novonoina ho faty.
1. Paricha, Satwant, Afaka mihemotra ankoatra ny fahafatesana ve ny saina? Volan'ny 1: Fikarohana momba ny fiterahana amin'ny gasy, tranom-barotra Harman, New Delhi, 2008, pejy 6
2. Ibid, pejy 5-7